UK marnaba sidan kuma ahaan jirin telefoonnada casriga ah - BBC News Somali
UK marnaba sidan kuma ahaan jirin telefoonnada casriga ah
Lahaanshaha sawirka grinvalds, thinkstock
Mid ka mid ah seddexdii qof ee kaste ee qaangaar ah ee ku nool UK ayaa habeenkii telefoonkiisa ka fiiriya in farriin ay ugu soo dhacday, taasoo ay dadkaas qirteen inay muran ka dhex dhaliso qofka ay is qabaan ama isla nool yihiin.
"Telefoonnada casriga ah waxay dadka u suurto galiyaan inay si joogto ah ula socdaan waxa ay dadka kale yiraahdaan ama ay soo qoraan.
Maalintii oo dhan baad sidaa samayn kartaa, laakin telefoonnada casriga ah waxay dadka ku dhiirri galiyaan inay hawshaas habeenkii qabtaan," sidaa waxaa yiri Paul Lee oo madaxa tinolojiyadda ka ah hay'adda ka shaqaysa arrimaha warbaahinta iyo isgaarsiinta ee Deloitte.
Daraasaddii lixaad ee sannadlaha ah ee Deloitte ay samaysay ayaa lagu gorfeeyey dabeecadaha in ka badan 4,000 oo qof oo isticmaala telefoonnada gacanta. Afar ka mid ah shantii qof ee qaangaar ah ee ku nool UK waxay iminka haystaan telefoon casri ah, tiradaasoo la mid ah 37 Milyan oo qof, laakin inkastoo isticmaalku uu heerkaas gaarsiisan yahay, haddana warbixintu waxay ka digaysaa in suuqa telefoonnada casriga ah uu gaari doono heer uu sii xamili waayo.
Tirada koboca dadka cusub ayaa hoos u dhacday 7% sannadkan ilaa bishii Juun, taasoo ka soo dhacday 9% oo ay ahayd 12-kii bilood ee ka horreeyey.